XOG XASAASI + WARBIXIN: Ma wuxuu mideeyay Khilaafkii DF Somaliya iyo Jubbaland, siyaasiyiin ka soo horjeeda damaca Farmaajo?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI + WARBIXIN: Ma wuxuu mideeyay Khilaafkii DF Somaliya iyo Jubbaland,...
Farmajo ayaa doorashadii lasoo dhaafay ka guuleystay labadan madaxweyne/Sawir Hore/Villa Somaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa maalmihii dambe u muuqatay mid kacsan, kadib markii ay is-biirsadeen arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo dhawaan ay doorasho ka dhacday, hakinta duulimaadyada Kismayo iyo xayiraadii Sheekh Shariif.
Doorashadii khilaafka uu ka dhashay ee lagu doortay Axmed Madoobe oo udub dhexaad u ahayd xiisadda ayaa dowladda federalka waxay horay u sheegtay in aysan aqoonsaneyn doorashooyinkii ka dhacay Kismayo.
Dowladda federaalka iyo beesha caalamka ayaa walaac ka muujiyay hanaanka doorashada, waxayna dowladda ku tilmanatay mid baalmarsan sharciga.
Axmed Madoobe ayaa lagu eedeyay inuu afduubay hanaaka doorashada iyadoo qar ka mid ah musharrixiinta doorashada ay qadaceen.
Hadaladii ay soo jeediyeen siyaasiyiinta aan la dhacsaneyn siyaasadaha dowladda
Hogaamiyaha siyaasadda ayaa si kala gaargaar ah uga hadlay muranka doorashada iyo safarkii la joojiyay ee Sheekh Sharaiif ugu socday Kismayo.
Ma jirta wax war ay si w0ada jir ah u soo saareen hogaamiyayaasha mucaaraadka, balse waxay ka mideysnaayeen cambaareynta oo waxa ay u arkayeen tallaabi sharci darro ah oo ay dowladda ku dhaqaaqday markii ay Sh Shariif xayirtay.
Madaxweyne Shariif ayaa sheegay in uusan jirin xiriir wanaagsna o ka dhaxeeya maamulada dalka iyo dowladda federaalka, uusan jirinna maamul goboleed xor.
Wuxuu sheegay in isaga lagu xuman jiray in uu xiriir la leeyahay dowladda federaalka, balse taas ay xaqiiqda ka fogtahay.
“Aniga waxaa ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo in dowladda uu u jilcan yahay, in uu u dhaw yahay, mararka qaarna la yirahdo xitaa heshiis ayaa dhexmaray, ma aha sidaas, aniga dowladda waxaan uga aamusnaa turid aan u turaayo, in ay si degdeg ama khalad wax u halaabaan ma rabo”, ayuu Sheekh Shariif ka yiri shir jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho.
Sheekh Shariif oo ka hadlay xayiraadii lagu sameeyay ayaa waxaa uu sheegay in uu: “aaminsanahay in qof kasta oo muwaadin Soomaali ah in uu xaq u leyahay in uu u safro meesha uu doono iyo goorta uu doono. Waxaan u arkaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay ay sharcigii jebiso”, ayuu sii raaciyay Sheekh Shariif.
Waxaa kale oo uu sheegay in dowladda aysan xaq u lahayn inay sameyso tallaabadaas, arrintanna uu u arko tacaddi iyo in la jebiyay dastuurka dalka.
Sheekh Shariif ayaa intaas raaciyay in uusan dooneyn in uu dhexgalo “khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Axmed Madoobe iyo Madaxweyne Farmaajo “, balse uu yiri: “Markii doorashada ka dheceysay Puntland, yaa qabanqaabiyay – Ma Puntland baa mise dowladda dhexe? Yaa iiga jawaabi karo? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland? Labadaba sharcigaa u ogolaanayo in ay doorasho qabtaan”.
Wuxuu soo hadal qaaday dhibaato uu sheegay in dowladda ay ku heyso maamul goboleedyada.
“Siyaasiyiinta, ha noqdeeno axsaab ama madax maamul goboleed, waad ogtihiin dhibaatada ay dowladda ku hayso”.
Hadaladadii Xassan Sheekh Maxamuud – Madaxweyne hore
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xassan sheikh Maxamuud oo kamid ahaa dadkii ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka ayaa sheegay in falkii lagu joojiyay safarkii Sheekh Shariif ee Kismayo uusan ahayn mid waafaqsan sharciga dalka, dowladnimada iyo dadnimada.
“Waxaan cod dheer ku diidaya falka noocaas ah, dalkan meesha hadda uu jooga in uu horay uga dhaqaaqa ayaa rabnaa, laakiin wixii aan dowladnimo keeneyn ka deyi meyno naf, umana jilci doono , kamana aamuseyno”, ayuu yiri Xassan Sheekh.
Go’aankii ay dowladda xayiraada ku saartay duulimaadyada Kismayo ayuu sheegay in haddii aanan laga fiirsanin cawaaqib xumo ay ka dhalan karto.
“Soomaaliya waxay 30 sano sugeysay inay la wareegto maamulka hawada, wa nasiib darro in dowladda ay maamulka hawada u adeegsato hub siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada dalka”. Ayuu raaciyay.
Saciid Cabdulaahi Deni – Madaxweynaha Puntland
Inkastoo hadda sida muuqata uusan jirin golihii iskaashiga ee ay ku mideysanaayeen maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa qaar badan oo kamid ah waxaa la aaminsan yahay inay u janjeeraan dhanka xukuumadda federaalka.
Hasayeeshee maamulka Puntland oo dowladda federaalka ay isku khilaafeen arrimo dhowr ah ayaa tagaeero u muujiyay dib u doorashada Madaxweyne Axmed Madobe.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu kamid yahay martida lagu casuumay caleema saarka Madaxweynaha Jubaland, uuna ka qeybgeli doona, wuxuuna intaa raaciyay in falkii lagu la kacay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay Puntland cambaareeneyso.
Wuxuuna intaa ku daray in dowladda ay sameysay xadgudub dastuur, ayna tahay wax laga xumado.
“Hawada Soomaaliya ma ahan dukaan uu qof leeyahay, waa hawo sharci ku dhisan, sharcina lagu maro, aad baan uga xumahay in xad-gudub dastuur uu dhaco, qofka ra’yi siyaasadeed waa qabi karaa, laakin xayiraadda iyo isu-socodka lagu soo rogay Kismayo arrin sax ah ma ahayn”. Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur – Hogaamiyaha xisbiga wadajir
Inkastoo qaar kamid ah Madaxweynayaashii hore iyo kuwa maamul goboleedyada ay ka hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa waxaan meesha ka marneyn xildhibanaada taabacsan labada dhinac.
Siyaasiyiin badan oo katirsan labada aqal ee barlamaanka ee kala taageersan dhinaca dowladda iyo mucaaradka ayaa sidoo kale siyaaba kala duwan uga hadlay arrimaha ku gedaaman khilaafka doorashada Jubaland.
Waxaase muuqata in shakhsiyaadka ugu tunka weyn siyaasadda Soomaaliya iyo qaar kamid ah axsaabta mucaaradka ay aragtidooda hal meel ku biya shubatay, marka la eego qaabka ay uga falceliyeen xayiraadii Sheekh Shariif iyo khilaafka ka dhashay doorashadii Jubaland.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir, Cabdiraxmaan Cabdi shakuur oo tooshka ku iftiimaa khaladaad uu inta badan sheego inay geysato dowladda federaalka ayaa kamid ah siyaasiyiinta tageerada u muujiyay dib u doorahsada Axmed Madoobe.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu si xooggan u cambaareynayo xayiraadda safar ee loo geystay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed.
“Dalka kaligood ma lahan, dastuurkana kama wayna, haddiise ay u qaateen in dulqaadku yahay daciiftinimo, is-xakamayntu tahay itaal yari, tanaasulkana yahay taagdarri, dhabtii waddada ay ku socdaan waa mid horay ka xiran”, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Axmed Madoobe – Madaxaweynaha dib u doorashasdiisa muranka dhalisay
Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Jubaland oo ay in muddo ah ay is-hayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa madaxda federaalka ku eedeeyay inay burburinayaan nidaamkii federaalka ee la dhisay.
“Xaaladda dalka uu marayo waxay noqotay in uu lumo amniga, waxay noqotay in la waayo nidaamkii federaalka oo maanta dib loogu noqonayo, waxay noqotay in cunaqabateyn dhaqaale oo wadankii oo dhan lagu soo rogay laga bilaabo Somaliland iyo dalka intiisa kale”, ayuu ku sheegay Axmed madoobe oo dhawaan khudbad ka jeediyay Magaalada Kismayo.
Axmed Madobe wuxuu carabka ku adkeeyay in dowladda federaalka ay ku xad-gudubtay sharciga dalka, isagoona tusaale usoo qaatay xariga wasiirka amniga ee Jubaland oo ay dowladda federalka ku xirtay Magaalada Muqdisho.
Ma la oran karaa khilaafka federaalka iyo Jubaland wuxuu mideeyay mucaaradka dowladda?
Xildhibaan Amiin Daahir Jeesow oo ah xildhibaan taageersan xukuumadda ayaa BBC-da u sheegay in aysan jirin mucaarad arrinta Jubaland ku mideysan, oo mid walba uu u hangal taagayo xil.
“Hadafkooda guud wuxu yahay inay xil qabtaan, awoodana uma lahan inay midoobaan, oo kaarka ayay iska gubayo oo waxba isu ma quuraan”, ayuu yiri Amiin Jeesow.
Wuxuu intaa raaciyay in haddi xukuumadda ay ka tallaabsato sharciga, cida kula xisaabtameyso ay tahay barlamaanka, balse aysan ahayn in arrintas ay tilmaam ka bixiyaan shakhsiyaad bannaan jog ah.
Hasayeeshee Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa sheegay in uusan jirin midnimo guud oo ka dhaxeyso mucaaradka, balse ay muuqato in ay isku waafaqsan yihiin arrinta Jubaland.
“In mucaaradka ay ka hadlaan arrinta Jubaland waa mid u muuqata inay ku raadsanayaan tagaeero siyaasadeed, maadaama ololaha doorashada uu bilaabanayo oo waxay ku xumeynayaan xukuumadda oo ay cadaadis ku saarayaan, si ay Jubaland tagaeero uga helaan”.Ayuu yiri Cabdiwahaab.
Wuxuu kale oo uu sheegay in isu imaatanka dhinacyada siyaasadda ee ka soo horjeedo xukuumadda uu salka ku hayo doorashada soo soocota iyo sidii ay ugu midoobi lahaayeen xukuumadda.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowrkii sano ee ay jirtay waxay qaadatay go’aanno muran badan dhaliyay, kuwaas oo si gaar ah u taabanayay arrimaha gudaha, ayna ku kasbatay dhalleeceeyn iyo ammaan isku mid ah, waxaase aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonat xiisadda siyaasadeed ee Jubaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo isku dhinac ah iyo dowladda federaalka.
Khilaafkii DF Somaliya iyo Jubbaland